Private Label Boxes စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူလက်ကား Glitter Water Activated မှော်ကော်ကော်သုတ်ဆေး Weiti
Private Label Boxes များဖြင့်လက်ကား Glitter Water Activate မှော်ကော်ကော်သုတ်ဆေး
1,21 Self-adhesive အရည် eyeliner ဘောပင်
3, ငါတို့မှော် eyeliner မှားယွင်းသောကြိမ်ဒဏ်ကော်ဘို့ဖြစ်ပါတယ်
အရည် Self-adhesive Eyeliner ဘောပင်
Kalocils2in 1 Self-Adhesive Liquid Eyeliner သည်ဆေးကြောထားသောနည်းပညာ၊ ကိုယ်တိုင်ကော်၊ လုံခြုံ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ မျက်လုံးမထိခြင်း၊ အနံ့ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ချောမွေ့ခြင်းနှင့်သဘာဝ၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်ချွေးစိုခံနိုင်မှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ သင့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Eyeliner သည်အလွန်ပါးလွှာသောကော်နှင့်မျက်လုံးနှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်သည်။ ကြိမ်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သင်သည်မျက်ခုံးများသို့မဟုတ်သံလိုက်မျက်ခုံးများအစားကျွန်ုပ်တို့၏မှော်မျက်လှည့်ဖြင့်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
ကြိမ်ဒဏ်ကိုစက္ကန့် ၃၀ ခန့်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏အချိန်ကိုချွေတာပြီးအဆင့်များကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ခိုင်ခံ့သောရဲတိုက်သည်သင့်အားမျက်တောင်ပြုတ်။ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ရှက်ခြင်းမှကင်းဝေးစေသည်။ ရိုးရှင်းသောအဆင့်သုံးဆင့်မျက်တောင်ပေါ်တင်ရန်နှင့်အစပြုသူများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။ ကြိုးကိုတွန်းပါ၊ ထို့နောက်အစင်းကိုသင်၏စိုပြေသောလွင့်မျောနေသောနေရာတစ်လျှောက်ဆွဲပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ကြိမ်ဒဏ်ကိုတင်ပါ။ မမှန်သောကြိမ်ဒဏ်နှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကော် eyeliner လျှောက်ထားရန်ဘယ်လို?
၁ ။ အသုံးမပြုမီ ၁၀-၂၀ ကြိမ်မျက်စိကြည့်ပါ။
၂ ။ သင့်မျက်ခုံးခြေရင်းတစ်လျှောက်ရှိစက်ပစ္စည်းကိုဆွဲပါ။
၃ ။ သင့်ရဲ့ pineez နှင့်အတူမျက်တောင် Clamp ။
၄၊ မျက်လုံးကိုရိယာထဲသို့ညင်ညင်သာသာနှိပ်ပြီး ၀ တ်ပါ။
ဘယ်လို eyelash ကော် eyeliner အလုပ်လုပ်သလဲ?
ထုတ်ကုန်သည်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်တိကျသောကော်မျဉ်း (နှင့်အနက်ရောင်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်ခြယ်ပစ္စည်း) ချထားခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ မမှန်သောကြိမ်လုံးများကို Smudge-proof line တွင်ထားနိုင်သည်။ ထိုတွင်၎င်းသည်ကော်ကဲ့သို့ကပ်နေလိမ့်မည်။
စိတ်ကြိုက်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Eyeliner သေတ္တာများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအဆင်သင့်သိုလှောင်ထားသည့်နေရာများအတွက်မျက်ခုံးထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာများ၊ အဲဒီအစားစိတ်ကြိုက်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုငါတို့အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။ သာမာန်အားဖြင့်၊ အဆင်သင့်သိုလှောင်ထားသောသေတ္တာများ (သို့) အမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D UV Printing ကိုထောက်ပံ့သည်။ အကယ်၍ သင်သေတ္တာများ၏ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားမှုလိုအပ်လျှင်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောတံဆိပ်နှင့်လိုချင်သည့်အရောင်ကိုပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး eyelash ထုပ်ပိုးမှုကိုကျိန်းသေပြုလုပ်ပေးပါမည်။
ရှေ့သို့ အမြောက်အများစျေးပေါသည့်သီးသန့်တံဆိပ်ချွတ်စက် ၂၅mm Mink Eyelash ရောင်းချသူ
နောက်တစ်ခု: OEM 2020 Hot Popular Eye Liner ရေစိုခံမှော်အရည်အရည် Eyeliner ကော်ကော်
ရေ Activated Eyeliner
Professional ကကော် Black Eyeliner ရေစိုခံ ...
OEM ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ရေရေလှုပ်ရှားမှုအရည်တံဆိပ်ခေါင်း ...
OEM စက်ရုံ Bulk ကော်2တွင် 1 ရေစိုခံ Cus ...
2-in-1 မှားယွင်းသောအညစ်အကြေးများကို Liquid Eyeliner Pr ...
Super Strong ရေစိုခံ Eyeliner ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် ...
မျက်ခုံးများ, Eyelash Extensions များ, mink ကြိမ်ဒဏ်, မျက်စိကွန်း, Eyelash ရောင်းချသူ, မျက်လုံး,